Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Caalamka uu soo dhismayo – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamka la leedahay dowladda Soomaaliya uu aad u soo dhismayo.
Isagoo Madaxweynaha ka hadlayay safaradii uu ku tagay dalal ka tirsan caalamka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wixii howl ah ee ku saabsan dowlad dhisida iyo baahideeda inay iyagu qabtaan, Caalamkana uu taageero ku siiyo.
“Mashruuca aan rabno inaan qabano waa dowlad dhisid, dowlad shaqeyneysa, amniga soo celisa, kalsoonida soo celisa maamulka ku baahiso dalka oo dhan ayaa nagala rabaa, caalamka shaqo wanaagsan oo gar gaar leh ayuu noo qabanayay 22-kii sano ee la soo dhaafay”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay inay jiri karaan dhaliilo, hase ahaatee loo baahan yahay in la saxo, waxaana uu tilmaamay in dowlad kasta ay qalad ka dhici karaan.
Waxaa uu sheegay in shacabka Soomaaliyed looga baahan yahay inay ka faa’ideystaan aqoonsiga ay caalamka ka helayaan, si dowladnimada loo xoojiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safar qaatay muddo labo todobaad ku tagay dalalka Itoobiya oo uu uga qeyb galay shirkii Midowga Afrika, magaalada Brussules ee dalka Belgium, Britain iyo dalka Masar oo uga qeyb galay shirkii Ururka Islaamka.
Dadka naqdiya siyaasada dowladda ayaa waxay sheegayaan in Madaxweynaha uu isku koobayo awoodii dowladda, iyo safarada dibada, hase ahaatee Xafiiska Madaxweynaha ayaa sheegaya in arrinta tahay mid lagu xoojinayo xiriirka siyaasadeed ee dowladda la leedahay caalamka, kaasoo mudooyinkii u dambeeyay uu aad u soo xoogeysanayay.